24 Mgbe Nebukadreza bụ́ eze Babịlọn si na Jeruselem dọrọ Jekonaya+ nwa Jehoyakim+ bụ́ eze Juda n’agha, tinyere ndị isi Juda na ndị omenkà+ na ndị na-ewu mgbidi siri ike, wee kpụrụ ha laa Babịlọn,+ Jehova gosiri m nkata abụọ mkpụrụ fig dị n’ime ha, ndị a dọsara n’ihu ụlọ nsọ Jehova. 2 Mkpụrụ fig ndị dị n’otu nkata dị ezigbo mma, dị ka mkpụrụ fig mbụ;+ ma mkpụrụ fig ndị dị na nkata nke ọzọ mebiri emebi nke ukwuu, a pụghị iri ha eri n’ihi otú ha si mebie emebi. 3 Jehova wee sị m: “Jeremaya, gịnị ka ị na-ahụ?” M wee sị ya: “Ana m ahụ mkpụrụ fig, mkpụrụ fig ndị dị mma dị ezigbo mma, ma mkpụrụ fig ndị mebiri emebi mebiri nke ukwuu, a pụghị iri ha eri n’ihi otú ha si mebie emebi.”+ 4 Okwu Jehova wee ruo m ntị, sị: 5 “Nke a bụ ihe Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru, ‘Ndị a e si na Juda dọrọ n’agha, ndị m si n’ebe a chụga n’ala ndị Kaldia,+ m ga-ele ha anya ọma,+ dị ka mkpụrụ fig ndị a dị mma. 6 M ga na-ele ha anya ọma,+ m ga-emekwa ka ha lọta n’ala a.+ M ga-ewu ha dị ka ụlọ, agaghị m akwatu ha; m ga-akụ ha dị ka osisi, agaghịkwa m efopụ ha.+ 7 M ga-enye ha obi ha ga-eji mara m,+ na mụ onwe m bụ Jehova; ha ga-abụ ndị m,+ mụ onwe m ga-abụkwa Chineke ha, n’ihi na ha ga-eji obi ha dum lọghachikwute m.+ 8 “‘Dị ka mkpụrụ fig ndị ahụ mebiri emebi, ndị a na-apụghị iri eri n’ihi otú ha si mebie emebi,+ n’ezie, nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Otú ahụ ka m ga-eme Zedekaya+ bụ́ eze Juda na ndị o mere ndị isi na ndị fọdụrụ na Jeruselem bụ́ ndị fọdụrụ n’ala a+ nakwa ndị bi n’ala Ijipt+— 9 m ga-emekwa ka ha ghọọ ihe na-akpata ịma jijiji na ndị ọdachi ga-adakwasị n’alaeze niile nke ụwa,+ meekwa ka ha ghọọ ihe nkọcha na ihe e ji atụ ilu na ihe ịkwa emo+ na ihe a bụrụ ọnụ+ n’ebe niile m ga-achụsasị ha.+ 10 M ga-ezitere ha mma agha,+ ụnwụ+ na ọrịa na-efe efe,+ ruo mgbe ha nwụchapụrụ n’ala m nyere ha na ndị nna nna ha.”’”+